Jose Mourinho: John Terry Ma Ahan Cunsuri, Laakiin Waa U Qalmaa In La Ganaaxo. - jornalizem
Jose Mourinho: John Terry Ma Ahan Cunsuri, Laakiin Waa U Qalmaa In La Ganaaxo.
Tababaraha kooxda Real Madrid Jose Mourinho ayaa shaaca ka qaaday in daafaca kooxda Chelsea John Terry inuusan aheyn cunsuri inkastoo afar kulan lagu ganaaxay inuu hadalo cunsurinimo ah ku aflagaadeeyay Anton Ferdinand.
Mourinho oo macalin u soo ahaa Terry xilligii uu joogay Stamford Bridge, ayaa qirtay in kabtanka Blues inuu ku hadlay hadalo aan habooneyn oo carro ay keentay, lakiin waxaana uu sheegay inuusan runtii aheyn cunsuri.
“Terry ma ahan cunsuri” ayuu Mourinho u sheegay CNN.
“Taas waa boqolkiiba boqol. Markii aan Chelsea joogay waxaan heysanay 12 ciyaaryahan Afrikaan ah. Waxa ay ahaayeen koox fantastik ah, waxaana uu xiriir fiican la lahaa qof walba oo ka mid ah.
“Lakiin kubada cagta gudaheeda waa ay ka dhici kartaa, waan ogahay waa ay dhici kartaa inta ay ciyaar socoto sababtoo ah mararka qaar kubada waa wax ka badan ciyaar, mararka qaarna waxaad bixineysaa jawaabo aan matalin waxa aad xaqiiqdii tahay.
“Waxa ay u badan tahay inuu ku hadlay hadalo cunsurinimo ah, ama uu kula dhaqmay ciyaaryahan ka soo horjeeda dabeecad cunsurinimo leh, mararka qaarna kubada cagta dhexdeeda ciyaaryahan naga soo horjeeda waxaan u fiirinaa si qaldan. Lakiin waa in laga abaalmariyaa hadalkiisa, sidaasi darteed waa in la ciqaabo.
“Lakiin fadlan, ha dhihin waa cunsuri, sababtoo ah waan ogahay waxa dhahayo… Drogba ayaa sidaas ku dhahaya, Geremi ayaa sidaas ku dhahaya, Makelele ayaa sidaas ku dhahaya, dhamaantood waxa ay ku dhahayaan in Terry uusan aheyn cunsuri.”